မီးလောင်မှုသတင်း Archives - Page 20 of 146 - Myanmar Fire Services Department
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဟေမာဇလရပ်ကွက်၊ ၂၉လမ်း၊ ၇၉x၆၀ လမ်းကြားတွင် မီးလောင်မှုသတင်း
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၂ ၃၇အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ဟေမာဇလရပ်ကွက်၊ ၂၉လမ်း၊ ၇၉x၆၀ လမ်းကြား၊ အကွက်(၆၂၁)၊ အိမ်အမှတ် (၉၃)နေ ပိုင်ရှင် ဦးမြင့်ဆွေ၏ (၆၀x၂၅)ပေ နံကပ်(၂)ထပ်ခွဲ သရဖူစားသောက်ဆိုင်ရှိ အလုပ်သမားအိပ်ဆောင်တွင် အလုပ်သမားများမှ...
House fire at Bamaw township, Kachin state
Oct 28 2020, at about 05 10, house fire occurred at the two storey house ( 27’x 24′) galvanized steel coil roofing in the Nyaung Pin ward, Bamaw township, Kachin state. The unattended electric kettle started the fire and the fire spread to the wooden utensils near the...
Page 20 of 146« « Previous...10...1819202122...304050...Next »